Klopp Oo Soo Xushay Labada Xidig Ee Uu Ugu Jecel Yahay Ciyaartoyda Liverpool - Kuma Jiro Saalax! %
Tababaraha kooxda kubada cagta Liverpool, ninka lagu magacaabo Jurgen Klopp ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in laacibiinta kala ah: Sadio Mane iyo Roberto Firmino ay yihiin kuwa uu mar walba qiimaynta gaar ahaaneed uu siiyo.
Wuxuu daboolka ka qaaday hogaamiyaha Reds in Mane iyo Firmino ay yihiin kuwa mar walba jecel inay sare ukac badan ay ka sameeyaan heerka ay hada joogaan, isagoona ku booriyay inay joogteeyaan hamiga sare oo ay leeyihiin.
Isagoo wareysi xiiso leh siinayay Majaladda Bet Victor, ayaa wuxuu cod ku tilmaamay Klopp inuu diyaar uyahay inuu dhamaan ciyaartoydiisa uu cadaalad usameeyo, uuna garoonka kusoo bilaabo mid walba oo kooxda wax qabad fiican usameynaya.
“Ma umalaynayo inaanan cadaalad ah usameyn qaar kamid ah caruurteyda,” ayuu ku jawaabay Klopp mar la weydiiyay hadii uu jiro ciyaaryahan uusan jeclaysan bandhigiisa, islamarkaana uu keydka udhigo arrintaan darteeda.
“Caruurtayda qaarkood sida [Sadio] Mane ama waxa uu sameynayo [Roberto] Firmino, maxaa yeelay waxay yihiin kuwa mar walba diyaar u ah inay sare ukac ay sameeyaan,” ayuu ku jawaabay mar la su’aalay xidigaha uu ugu jecel yahay.
“Laakiin, waxaa hubaa in shaqadaydu ay tahay inaan si siman umaamulo ciyaartoyda iyaguna waa ay ogyihiin, inaan maalin walba kala hadlo waxa ugu wanaagsan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, tababare Jurgen Klopp.